VIDIO | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
Tragbọ oloko abuo gbakọtara na Bangladesh: 15 nwụrụ anwụ, 58 merụrụ ahụ; 03.00 gbara n’abalị ụnyaahụ na Bangladesh n’oge mpaghara, dị ka ihe mberede na ụgbọ oloko ọzọ na-esite na Chittagong na mpaghara Brahmanbaria nke ọwụwa anyanwụ Dhaka wee daa. [More ...]
Nsogbu Abiaala njem njem njem njem na India 16 merụrụ ahụ; N’India, ụgbọ okporo ígwè na-eme njem merụrụ ahụ wee tụọ ụgbọ njem ndị ọzọ. Ndị 16 merụrụ ahụ n'ihe mberede ụgbọ oloko na Hyderabad. Ihe ọghọm a mere n'akụkụ ebe ụgbọ okporo ígwè Kacheguda dị na Hyderabad steeti Telangana steeti. [More ...]
Ahịa tiketi Marmaray na njem Marmaray: constructionrụ ọrụ Marmaray, nke ga-ejikọ okporo ụzọ dị n'akụkụ abụọ nke Bosphorus, na-aga n'ihu ngwa ngwa. Lineszọ ụgbọ okporo ígwè na-agafe n'okpuru Bosphorus ma jikọta ibe ya site na njikọ okporo ụzọ ụgbọ oloko. [More ...]
• 13.500 n'ogologo zuru ezu, nke mejupụtara 27000 m, nke ọ bụla nwere ahịrị abụọ. • A na-eme ntụpọ obero site n'ọwara mikpuru na ogologo nke ahịrị 1 mikpuru mmiri 1386.999 m, Line 2 mikpuru [More ...]
Ihe Mwepu Ngwongwo nke Njikọ Na-edebanye aha na Yamanevler Metro Station; Ndị uwe ojii nọ n'ọdụ ọdụ Yamanevler mata mmadụ abụọ chọrọ iji ụgbọ ala na mgbọ rịa elu. E nyefere ndị njem nọ na ngwaọrụ X-ray ahụ ìgwè ndị uwe ojii. Ndị ọrụ Metro Istanbul [More ...]
Na Istanbul, ememme 29 October Republic nke ụgbọ oloko n'okporo ụzọ na uwe mkpuchi, a na-abụ abụ nke iri. Ezie na ekesara foto ndị a na mgbasa ozi mmadụ, a kọwapụtara ihe a dị ka “ihe na-akpaghasị uche nke ndị Islamists na mmeghachi omume dọtara. Mgbe mkparịta ụka ndị a mere, Range [More ...]
Edere vidiyo nke edere na Ọktọba na Istanbul Metro 29 dọtara nnukwu mmeghachi omume. 10 na ụzọ ụgbọ oloko. Nwa amaala nke nwere akwa, nke na-esote ụmụ amaala Afọ Anthem, nọ na-aga njem ya na-emeghị ihe ọ bụla ma na-ekwughi onye ọ bụla. full [More ...]
Ünalan Station Station nche enyo enyo mmeghari nke ndị njem nwere nkwarụ, a kpọtụrụ nna ya napụta ezinụlọ ya. Nna ahụ, onye zutere nwa ya nwoke amaghị na nwa ya nwoke enweghị ike ilekọta nwunye ya anya n'oge ọ na-arụ ọrụ ụbọchị. [More ...]
Ọkụ na ụgbọ oloko njem na Pakistan ..! 65 nwuru anwu; Threegbọala atọ gbara ọkụ na ụgbọ oloko si Lahore ruo Karachi, Pakistan. Dịkarịa ala, ndị 65 nwụrụ na ọkụ. Minista Rail Pakistan Sheikh Rashid Ahmed kwuru na nkwupụta: [More ...]
Ejiri mkpụrụ ego nke ndị njem jiri ule 'mgbọ egbe' nke ụwa nke China mepụtara ma nwee ike 350 km kwa elekere jiri mkpụrụ ego nke ndị njem were nwalee. Nnwale na-ama jijiji, nnwale nke onye njem na-ekwupụta na mkpụrụ ego ahụghị ịma jijiji na oke ọsọ ogologo oge. Ilzọ ụgbọ oloko yiri nke ahụ [More ...]
Onye isi njikwa DHMİ na Onye isi oche nke Hüseyin Keskin, 29 October 2020'de zubere imepe na ọdụ ụgbọ elu Gaziantep, a na-enyocha ebe a na-ewu ụgbọ elu ọhụrụ. Onye isi njikwa DHMİ Hüseyin Keskin kwuru nkwupụta ndị a mgbe nyochachara ya na ọdụ ụgbọ elu Gaziantep: “Ọdụ ụgbọ elu [More ...]
Ndị ọrụ Istanbullọ Ọrụ Ntughachi Mọnti ezighachiri ndị njem nwere nkwarụ furu efu na ezinụlọ. Ndị ọrụ IMM, ndị njem nwere nkwarụ n'ụgbọ okporo ụzọ ụgbọ ala, ndị na-enyo enyo maka mmegharị ahụ site na ịkpọtụrụ nwa ya nwoke ka a nyefere ya na ezinụlọ ya. Pasent nke ndị njem nwere nkwarụ ụbọchị 50 4 efuola. Istanbul [More ...]
3 lekwasịrị anya na sistemụ okporo ígwè metro. Nzukọ International Metrorail Forum kpọkọtara ndị na-eme mkpebi nke ọha na ndị otu na Ankara ATO Congresium. N'okpuru nkwado Cahit Turhan, Minister nke ofgbọ njem na akụrụngwa, TCDD Main Nkwado, KGM, AYGM Istanbul Metropolitan. [More ...]
Senzọ Esenboga Airport, Stations na Video Nkwado. 1 oru ngo a, nke ga - eme ka ọ dị mfe njem site na etiti obodo Ankara na ọdụ ụgbọ elu Esenboga na Ankara, ga-efu ijeri dollar. Esenboga Airport na 15 July Red Crescent National Will Square metro project [More ...]
Emebiwo ebe nile emere na ala ala Esenler Bus Station nke IMM weghaara. Obodo isi obodo Istanbul (IMM), 9 weghaara na Septemba 15 July Democracy Bus Station (Esenler) na-asachapụ ebe ndị a na-eleghara anya. Ebumnuche nke ala ala nke ọdụ ụgbọ ala [More ...]
Elephant Hit the Train Na India. N’India, ụgbọ okporo ígwè na-efe efe na-akụda azụ̀ na-aga n’elu okporo ụzọ. Enyí ahu, merụrụ ahụ nke ọma, wee jiri aka ya gaa n'ọhịa ahụ. Ihe mberede ahụ mere na Jalpaiguri, North Bengal. N'ebe ọdịda anyanwụ India [More ...]